स्क्रब टाइफसका कारण मृत्युदर घट्दै, सङ्क्रमण बढ्दै – Nepali news portal
५ आश्विन २०७६, आईतवार १४:२९ September 22, 2019 काठमाडौं डेष्क
काठमाडौं: तपाई खेतबारीमा काम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ ? आफ्ना घर वरिपरिका झाडी सफा गर्दै हुनुहुन्छ ? अथवा मुसाका बासस्थानतिर केही काम गर्दै हुनुहुन्छ ? होस् गर्नुहोला । कतै मुसाको टोकाइबाट अकालमा तपाईको मृत्यु पनि हुनसक्छ ।
दसैंको अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला, कुन ठाउँको भाडा कति ?